Nice နှင့်၎င်း၏ Charm | ခရီးသွားသတင်း
Mariela Carril | | လမ်းပြ, ကောင်းတယ်
ကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်ခက်ခဲသောအချိန်များကိုဖြတ်သန်းနေရသော်လည်းအေးသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုစွန့်ခွာသွားပြီ၊ ပူနွေးသောနေ့ရက်များနီးကပ်လာနေပြီးလမ်း၏အဆုံး၌အလင်းစတင်ထွန်းလင်းတောက်ပနေသည်။ အရာရာတိုင်းဖြစ်ပျက်ပြီးဖြစ်လိမ့်မယ်။ သူတို့ကအမြဲတမ်းငါ့ကိုပြောကြမယ်။ နေနှင့်လေ၊ ပင်လယ်၊ အစာကောင်းစားရန်နှင့်လှပသောနေရာကိုမည်သည့်နေရာ၌ပျော်မွေ့လိုပါသနည်း။ ကောင်းတယ်!
ကောင်းပါတယ် ပြင်သစ် Riviera ၏မြို့တော် နှင့်ကမ္ဘာပေါ်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးခရီးသွားနေရာများတစ်ခု။ မြေထဲပင်လယ်နှင့်တောင်တန်းများကြားတွင်ကျော်ကြားသောပြတိုက်များ၊ ကောင်းသော gastronomy၊ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များနှင့်ဘဏ္treာများစွာရှိသည်။ ဤထာဝရဆောင်းရာသီကုန်ဆုံးချိန်တွင် Nice သည်ရှိလိမ့်မည်။
2 Nice မှာကြည့်ဖို့ဘာ
ဒီဟာကပြင်သစ်နိုင်ငံပါ ၎င်းသည် Provence - Alps - Côte d'Azur ဒေသတွင်ရှိသည်။ အရမ်း အီတလီနှင့်အတူနယ်စပ်အနီးကီလိုမီတာ ၃၀ ခန့်အကွာနှင့် Monaco နှင့်ပိုမိုနီးကပ်စွာ၊ ကီလိုမီတာ ၂၀ သာဝေးသည်။ ပါရီကဘယ်လောက်ဝေးပါသလဲ 30 ကီလိုမီတာပေမယ့် Marseille မှ 230 ရုံ.
Nice သည်ကောင်းမွန်သောအရွယ်အစားရှိပြီး ၀ ယ်ယူနိုင်စွမ်းရှိသောမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်။ ဒီမှာနွေရာသီကိုသုံးတဲ့လူအများစုမှာပိုက်ဆံကောင်းကောင်းရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒါကသာမန်လူတစ်ယောက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာမဆိုလိုပါဘူး ဂျက်လေယာဉ် မဟုတ်သလိုနွယ်, ကောင်းတစ် ဦး နေ့ရက်ကာလကိုရှိသည်မဟုတ်နိုင်ပါ။
အီတလီနှင့်အလွန်နီးကပ်သောကြောင့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံနှင့်၎င်း၏ဆက်သွယ်မှုသည်ငြင်း။ မရနိုင်ပါ XNUMX ရာစုအဆုံးမှာပြင်သစ်တို့ကသိမ်းပိုက်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အမြဲတမ်းအရေးကြီးသောနယ်စပ်မြို့တစ်မြို့ဖြစ်သော်လည်းအမှန်တကယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမှာခရီးသွားလုပ်ငန်း၏လက်မှဖြစ်သည်။ အင်္ဂလိပ်ဆောင်းတွင်းမှလွတ်မြောက်ရန်မြို့ကိုရွေးချယ်သောအခါဘုရင်မဗစ်တိုးရီးယားကိုယ်တိုင်ကန ဦး တွန်းအားပေးခဲ့သည်။
ကောင်းပါတယ် မြို့သည်ရှေးအကျဆုံးဇုန်နှစ်ခုအဖြစ်ခွဲထားသည် Paillon ၏ဘယ်ဘက်ကမ်းခြေသည်အိမ်နီးချင်းတူရင်နှင့်အလွန်ဆင်တူသည်။ The ညာဘက်ဘဏ်အများဆုံးပြင်သစ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် မြို့ပြပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးသမားနှင့်ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံသူ Haussmann ၏ပုံစံနှင့်အတူ။
စကြရအောင် အသက်အကြီးဆုံးအပိုင်း မြို့ကနေ။ ဒီမှာခေါ်ဆိုမှုပါ Castle Hillထိုနေရာသည်အလယ်ခေတ်ခံတပ်တည်ရှိရာနေရာဖြစ်ပြီးနှစ်ပေါင်း ၃၀၀ ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးဖြိုဖျက်ခံခဲ့ရသည်။ ၎င်းကို ၁၈ ရာစုတွင်လူးဝစ် XIV မှဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးနောက်ဆုံး ၁၉ ရာစုတွင်စစ်တပ်ကလွှမ်းမိုးခဲ့သည်။ ထိုအချိန်ကအထက်တန်းလူတန်းစားသည်မြို့၏ဤအစိတ်အပိုင်းကိုနေထိုင်ခဲ့သည့်အတွက်၎င်းသည်ထိုနေရာ၏ဗဟိုဖြစ်သည်။
အဟောင်းကိုအစိတ်အပိုင်းအတွက်ဖြစ်ပါတယ် Sainte Réparateဘုရားရှိခိုးကျောင်းအဆိုပါ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနန်းတော် (လက်ရှိစီရင်စု၏နန်းတော်), အ အများပိုင်နန်းတော် သို့မဟုတ် စိန့်ဖရန်ကိုစတုရန်း တံငါသည်များထံမှစျေးကြီးသောအိမ်သာသို့သွားသောဆိပ်ကမ်း သင်္ချာ။ ဒါ့အပြင်အပေါ် Cimiez တောင်ကုန်း Belle Epoque မှလှပသောအဆောက်အ ဦး များစွာကိုယနေ့မြင်တွေ့ရလိမ့်မည်။ အများစုမှာယနေ့ခေတ်တွင်စျေးကြီးသောတိုက်ခန်းများသို့မဟုတ်စျေးကြီးသောဟိုတယ်များသို့ပြောင်းလဲသွားသည်။ ဤတွင်လည်း ၁၉၇၀ ပြည့်လွန်နှစ်များမှစတင်ကာစားသောက်ဆိုင်များနှင့်ကော်ဖီဆိုင်များတွင်လူသွားလူသွားလမ်းကောင်းတစ်ခုရှိသည်။
အမှန်တရားကတော့ Nice ဟာသူ့ရဲ့အများပြည်သူသုံးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်အတွက်မတောက်ပပါဘူး စက်ဘီးငှားသို့မဟုတ်လမ်းလျှောက်။ သူကမြို့ပြthroughရိယာကိုဖြတ်ပြီး ၁၂၅ ကီလိုမီတာရှည်တဲ့စက်ဘီးလမ်းကြောင်းရှိတယ်။ ၎င်းကိုဘဏ်ကဒ်ဖြင့်ငှားရမ်းထားပြီး၊ နာမည်ကြီးပဲရစ်စက်ဘီးနဲ့တူအလုပ်လုပ်ပါတယ်ဥပမာသည်။
အမှန်တရားကတော့ထောင်ပေါင်းများစွာသောလူတွေဟာ Nice ကိုနေ့စဉ်ဖြတ်သန်းသွားလာကြပြီးပထဝီဝင်အနေအထားကမကူညီပါဘူး။ သုံးလမ်းလိုင်းရှိတယ် ထို့အပြင်ပထမ ၇၄ မိနစ်အတွင်းယူရို ၁,၅၀ ဖြင့်ပြောင်းလဲရန်သင်လက်မှတ်တစ်စောင်တည်းသုံးနိုင်သည်။ multi-pass ၁၀ ခုသို့မဟုတ်တစ်ရက်သို့မဟုတ် ၇ ရက်သို့မဟုတ်အပြန်အလှန်သွားနိုင်သည့်လက်မှတ်ကိုလည်းသင်ဝယ်ယူနိုင်သည်။ Nice လည်းထက်ပိုပါတယ် 130 ဘတ်စ်ကားလမ်းကြောင်း နေ့နှင့်ည ၉:၀၀ နာရီနှင့် ၁၀း၁၀ အကြားတစ်နာရီလျှင် ၅ ကြိမ်အလုပ်လုပ်သော Noctambus နှင့်နေ့တို့တွင်အလုပ်လုပ်ကြသည်။
ဒါကြောင့်ကျွန်မရဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းကိုဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ် နစ်စီမှာဘာကိုတွေ့နိုင်တာလဲ ကျနော်တို့က၎င်း၏ပြတိုက်နှင့်အတူစတင်နိုင်ပါသည်, ပြတိုက်အကြား 15 ကျော်ရှိပါတယ် မြူနီစီပယ်, ဌာနဆိုင်ရာသို့မဟုတ်အမျိုးသားရေး: ရှိပါတယ် သဘာဝသမိုင်းပြတိုက်၏လှပသောအဆောက်အ ဦး Massénaပြတိုက် ထဲမှာ အင်္ဂလိပ်လမ်းလျှောက်အဆိုပါ Jules Cheret အနုပညာပြတိုက်အဆိုပါ Matisse ပြတိုက် ၁၇ ရာစု Genoese ဗီလာတွင် ခေတ်ပြိုင်အနုပညာ MAMACအဆိုပါ Palais Lascaris သို့မဟုတ် မာ့ခ် Chagall အမျိုးသားပြတိုက်အခြားသူများများထဲတွင်။
လူတိုင်းအတွက်တစ် ဦး ချင်းလက်မှတ်ကို ၂၄ နာရီ ၁၀ ယူရိုဖြင့်၊ တစ် ဦး ချင်းလက်မှတ်ကို ၇ ရက်အတွင်းယူရို ၂၀ ဖြင့်လည်းကောင်း၊ အုပ်စုလိုက်လက်မှတ်ကိုလူ ၁၀ ဦး မှ ၉ ယူရိုဖြင့် ၀ ယ်နိုင်သည်။ ပြတိုက်များအပြင်သင်သိနိုင်ပါသည် အထိမ်းအမှတနှင့်ဘုရားကျောင်း နှင့်မြို့၏ကြွယ်ဝသောဗိသုကာအမွေအနှစ်ပျော်မွေ့။
အရာအားလုံးနည်းနည်းလေးပဲရှိပေမယ့်မင်းရဲ့ခရီးစဉ်ကိုသင်မထွက်ခွာနိုင်ဘူး The Place Masséna XNUMX ရာစု, Les Ponchettes, နောက်ဆက်တွဲအဆောက်အအုံများသည် ၁၉၂၀ ပြည့်နှစ်များမှပြခန်းများ၊ ပြတိုက်များသို့ပြောင်းလဲခဲ့သည် Le Palais de la Méditerranéeအဆိုပါ Cimiez ဘုန်းကြီးကျောင်းသုသာန် Mat Garde, du Gard နှင့် Dufy တို့၏သင်္ချိုင်းဂူများရှိသည် Monte Alban ၏ခံတပ် Boron တောင်ပေါ်မှာ ...
လည်းရှိပါတယ် အသင်းတော်များနှင့် Chapel ၁၇ ရာစုမှစိန့်မာရင်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းနှင့်စိန့်သြဂတ်စတင်းတို့၏ဘုရားကျောင်းသို့မဟုတ် ၁၈ ရာစုမှကရုဏာ၏ Chapel စသည့် Notre Dame basilica ၎င်းသည်အကြီးဆုံးဒေသခံဘုရားရှိခိုးကျောင်းဖြစ်ပြီး ၁၆ ရာစုမှ Angers ဘုရားရှိခိုးကျောင်းသို့မဟုတ် Sainte Réparate၏ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကမှုတ်သွင်းခြင်းဖြစ်သည်။ ရည်ရွယ်သည် Garibaldi နန်းတော်အဆိုပါ Le Negresco နန်းတော်, ကြော့ Baroque ပုံစံ Palais Lascaris, ၏အဆောက်အ ဦး အော်ပရာ Nice ကုတ် d'Azur, Saint Francois ၏မျှော်စင်အဟောင်းနှင့်ကြော့ Maison d'Adam et .ဝ XNUMX ရာစုကနေ၎င်း၏ထူးခြားတဲ့ Bas- ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းနှင့်အတူ။
နှင့်အညီ, သင်ကဖြတ်သန်းကောင်းတစ်လမ်းလျှောက်တာကိုရပ်တန့်မထားသင့်။ အင်္ဂလိပ်လမ်းလျှောက် ပန်းတွေအမြဲရှိတယ်၊ ပင်လယ်ကိုအမြဲကြည့်ပြီးလှပတယ်။ ပန်းခြံတွေ၊ ဥယျာဉ်တွေ၊ စျေးကွက်တွေလည်းရှိတယ်။ ဒါကြောင့်ဒီမှာနေတဲ့နစ်ခ်စ်မှာနေဖို့ခက်တယ်။ စျေးဆိုင်များနှင့်ကုန်တိုက်များ၊ ကမ်းရိုးတန်းနှင့်၎င်းကိုထည့်သွင်းပါ အချက် ၆၀ ကျော်၌အခမဲ့ WiFi ပါရှိသည်... ငါကပြောလိမ့်မယ်, ဒါကaည့်သည်ပြန်လာရန်လိုတဲ့ဒီဇိုင်းမြို့။
ငါတို့အားသာချက်ယူပြီးအချို့လုပ်နိုင်မလား တစ်ရက်ခရီး ကောင်းပါတယ်? ဟုတ်ပါတယ်, သင်ဘတ်စ်ကား 81 စီးနှင့်အိမ်နီးချင်းသွားရောက်နိုင်ပါတယ် Villefrance sur Mer ငါးကီလိုမီတာသာကွာဝေးသည် ဒါမှမဟုတ်ကျေးရွာကိုဆက်သွားပါ Beaulieu သို့မဟုတ်အနည်းငယ်ထပ်မံ စိန့်ဂျင်း Cap Ferrat။ သူတို့က Nice နှင့်ချစ်စရာကောင်းနေရာများ၏ဆင်ခြေဖုံးဖြစ်ကြသည်။ အနောက်ဘက်မှာလည်းရှိပါတယ် ကိန်းနှင့် Monte Carloသင်မူကားတောင်များများလိုလျှင် Chemin de Fer de Provence Canyon သို့ချဉ်း ကပ်၍ ၎င်းကိုဖြတ်သွားနိုင်သည် မဟုတ်ပါ.
ဗာမြစ်၏ချိုင့်ဝှမ်းကိုတက်သွားသည့်၊ မယုံနိုင်လောက်အောင်ရှုခင်းများကိုဖြတ်ကျော်။ အန္နတ်ကို ဖြတ်၍ Digne သို့ရောက်သောဘုရားသခင့်ရထားတစ်စင်းရှိသည်။ သင်တစ်ရက်ခရီးစဉ်သာလိုလျှင် Annot ကိုရယူပါ။ သင်ကြည့်ရှုနိုင်သည့်အတိုင်းကောင်းမွန်သောတည်နေရာသည်နောက်ထပ်ခရီးစဉ်များကိုစီစဉ်ရန်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ ခရီးလမ်းဖြောင့်ဖြူးသာယာပါစေ!
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » မြို့ကြီးများ » ကောင်းတယ် » Nice နှင့်၎င်း၏ Charm